YUFA wuxuu kaqeyb galayaa Shirka Sanad guurada 30aad ee Madasha Horumarinta Warshadaha ee Ururka
Shirka Sannad-guurada 30aad ee Madasha Horumarinta Warshadaha ee Ururka (Wareegga Labaad) waxaa qaban doona Ururka Isboortiga Shiinaha ee Warshadaha (ACRI) Maarso 31-Abriil 2, 2021 magaalada Luoyang, gobolka Henan. Inta lagu guda jiro shirka, waxaan dib u eegi doonnaa horumarka ee warshadaha diidmada ee ...
Himilada YUFA ee Mustaqbalka
Marka xigta, YUFA waxay qorsheyneysaa inay dhisto laba foornooyin oo foorari kara koronto (warshad Ruzhou), taas oo kordhin karta awoodda wax soo saar ee corundum ilaa 20,000 tan; Shirkadda Zhengzhou YUFA Fine Ceramics Technology Co., Ltd. waxay qorsheyneysaa inay ku darto khad cusub oo wax soo saar si loo kordhiyo awoodda alumina calcined oo dhan 20,000 tan. Macnaheedu...
2021 Shirweynaha Is-weydaarsiga Tacliinta Maaddooyinka Qaranka ee Soo-Jeedinta
Zhengzhou YUFA Abrasives (Group) Co., Ltd. waxay kaqeyb qaadatay martigelinta "2021 Shirka Isweydaarsiga Maaddooyinka Tacliinta Qaranka" Waxaa la qorsheynayaa in lagu qabto Chongqing Maajo 10-13, 2021. Bilowga Sannadka Cusub ee 2021, Zhengzhou YUFA Abrasives (Group) Co., Ltd., sida o ...
Joogitaanka YUFA Iyo Dammaanadda Tayada
Wax soo saarka wanaagsan wuxuu ka yimaadaa xakamaynta tayada adag. Kooxda YUFA waxay muhiimad weyn siineysaa xakamaynta tayada wax soo saarka ee dhinacyada oo dhan. YUFA waxay leedahay nidaam kormeer tayo oo dhameystiran oo adag. YUFA waxay u sameysay tilmaamayaal warshad u dhigma macaamiisha kala duwan iyo alaabooyin kala duwan iyo ...
Bandhigga 13-aad ee Shanghai International Exhibition
Zhengzhou YUFA Fine Ceramics Technology Co., Ltd. waxaa lagu casuumay Ururka Caalamiga ah ee Ceramics Organisation si ay uga qayb galaan 13th Shanghai International Advanced Ceramics Exhibition laga bilaabo Ogosto 12 ilaa 14 Ogosto. Guddoomiyaha shirkadda, Mr. Zhang, ayaa shaqsiyan u yimid goobta, aniga ...
Iska ilaalinta covid-19
Ka dhanka ah coronavirus, YUFA waxay si adag u raacdaa shuruudaha ka hortagga qaran ee COVID-19 iyo xeerarka la xiriira si loo hubiyo badbaadada shaqaalaha. Si loo hubiyo shaqada wax soo saarka caadiga ah, tallaabooyinka maareynta nidaamsan ayaa la qaatay si ay si firfircoon uga jawaabaan caqabadda fayraska. Shirkadeena ayaa qaadatay ...
Mas'uuliyadaha Shirkadeed iyo Mas'uuliyadda Bulshada ee YUFA
Alumina isku dhafan oo cad ayaa iska leh wax soo saarka warshadaha Shiinaha ee aasaasiga ah. Sida "ilig warshadeed", waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa walxaha wax lagu nadiifiyo, qalabka diidmada, qalabka dhoobada, kiimikada elektaroonigga ah, shiida iyo sifaynta, saxsanaanta tuurista, qalabka dhismaha, batroolka, aerospace, militariga iyo ...
Kooxda Abrasives YUFA waxay sii wadaa inay sameyso cilmi baaris iyo horumarin wax soo saar
Zhengzhou YUFA Abrasives Group Co., Ltd. waxay haysaa baahida, waxay la socotaa suuqa, waxayna leedahay geesinimo ay wax ku cusub oo si firfircoon uga baarto wadada cilmi baarista iyo horumarka cusub. Waxay qaadatay in kabadan shan sano in lasoo saaro tiknoolojiyad sodium laga qaado soodhaweynta habka koronto. Iyada oo loo marayo ...